जनताको चुलोमै पुगे नगरप्रमुख::elumbinikhabar.com
भैरहवा, १८ चैत्र . धन्य हो सरकार ∕ अब यति भए बाचिन्छ । भन्दै एक अधबैशे आईमाई हातमा चामलको बोरा, एक लिटर तेल, एक केजी दाल, एक किलो नुन समाउदैं जोडले चिच्याइउदैं अगाडी बढिन् । उनले तीन चार पटक उक्त शब्द दोहोराईन ।
अलि टाढा बसेको मैले उनको तस्वीर खिचें । र उनको पछि पछि गएर सोधे ए चाचि (काकी) किन चिच्चाएको । उनले भनिन्, ‘हिजोदेखि चूल्हो बलेको छैन । अब गएर पकाउछु । ’
सिद्धार्थनगर पालिका वडा नम्बर १ म्यूडिहवाकी झिन्कू हरिजन (३५) को हिजो सांझदेखि घरमा चूल्हो नै बलेन । उनको भान्सामा तेल र नून सकिएको रहेछ । एक छोरा र तीन छोरीसंगै बस्दै आएकी हरिजन हप्तादिनदेखि काममा जान पनि पाएकी छैनन् । उनी भैरहवा क्षेत्रमा दैनिक रुपमा घरघरमा पुगेर कपडा धुने, भाडा माझ्ने काम गरेर गुजारा चलाउछिन् । यतिबेला उनीसंग नगद रकम पनि छैन । नजिकमा कुनै किराना पसल पनि छैन । यसैले सोमबार सांझ उनले भुजा र चना खाएर रात कटाईन, आमाले जस्तै छोराछोरीले भुजा चना खाए । मंगलबार बिहानै वडाका कर्मचारीले खबर गरे दिउंसो डण्डामा आउनु तिमीहरुलाई राहत दिईदैंछ । कर्मचारीको कुरा सुनेपछि उनको भोक थामियो र डण्डामा आएर कुरिरहिन् ।
दिउंसो १२ बजेदेखि उनी डण्डामा आएर बसीन् । डेढ घन्टा सम्म कोहि नआउदा उनलाई पिरलो पनि भयो । आउनै रहेनछन् की क्या हो भन्ने पनि परेछ । केहिबेरमा अरुहरु पनि आए । लगत्तै वडाध्यक्ष रमेश मल्ल र वडा सचिव पनि आउनुभयो । सबैजना नआत्ति बस्नु मेयर उपमेयर आउदैं हुनुहुन्छ , अनि सबैले दाल चामल नुन तेल पाउनुहुन्छ भनेपछि उनी ढुक्क भईन् ।
केहीबेरमा एउटा पीक अप भ्यान आयो । भ्यानमा खाद्यान्नहरु थिए । संगैसंगै नगरप्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी, उपप्रमुख उमा काफ्ले पनि आउनुभयो र वडाले तयार गरेको लिस्ट अनुसार उपस्थित सबैलाइ खाद्यान्न वितरण गर्नुभयो ।
खाद्यान्न पाएपछि झिन्कू मात्रै होइन बहुरी अहिर पनि गदगद देखिईन् । ५ छोरा र एक छोरी सहित भाडाको घरमा बस्दै आएकी उनले घर बनाउने लेबरको काम गर्छिन । आठ दिन देखि उनको पनि काम ठप्प छ । ‘काम नगरे खान पाइन्न , जसो तसो हप्ता दिन त चल्यो । यस्तै रहिरह्यो भने कसरी चल्छ र ? ’ अहिरले निराश हुदैं भनिन् , ‘ सरकारले यस्तै दाल चामल दिए त बाचिएला नत्र …. ’ छेउमै रहेकाले सम्झाउदैं भने सरकार छदैं छ किन आतिएको ।
झिन्कु र बहुरी जस्तै १ सय ३९ जनाको घरधुरीलाई सिद्धार्थनगर पालिका भैरहवा रुपन्देहीले दैनिक जीवनमा अति आवश्यक खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेकोछ । परिवार संख्याको आधारमा दिइएको उक्त राहत सामग्री चार जनाको परिवार हुने घरधुरीलाइ ५ केजी चामल, दस जनाको सम्म परिवार हुने घरधुरीलाइ १० केजी चामल दिइएको नगर उपप्रमुख उमा काफ्लेले बताउनुभयो । काफ्लेका अनुसार हरेक विपन्न परिवारलाई एक लिटर खाने तेल, एक केजी नून, एक केजी दाल पनि प्रदान गरिएको छ । उहांले भन्नुभयो,‘शुरुमा केही कम कम बितरण गरेका छौं । लकडाउन लम्बिदै गयो भने फेरि दिन्छौं । सरकार छ , कोही भोकै बस्न पर्दैन । ’
नगरमा लक डाउनको कारण कोहि पनि भोकै हुन नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले सिद्धार्थनगर पालिकाले नगरमा भएका मजदुरहरुको लगत संकलन गरेको छ । नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीका अनुसार नगरको १३ वटै वडामा १ हजार ८ सय ७२ जना ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवार रहेका छन् । ‘दैनिक काम गरेर बिहान बेलुकाको जोहो गर्नेहरु कोरोना भाइरसको कारण सरकारले गरेको लकडाउनमा परी घरभित्र बस्न बाध्य छन् । उनीहरुले काम गर्न पाएका छैनन । उनीहरुको जीवन यापनलाइ सहज बनाउन हामीले राहत बितरण शुरु गरेका हौं । ’ नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ।
सिद्धार्थनगर पालिकाको कार्यपालिका बैठकले चार दिन अगाडी बिहान बेलुका हातमुख जोहो गर्न नसक्ने परिवार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमीकहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरले कोरोना भाइरस नियन्त्रण राहत कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा नगरले यसअघि नै ११ लाख ५१ ह्जार जम्मा गरिसकेको छ भने विभिन्न सहयोगी व्यक्तिहरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । राहत कोषमा नगरका प्रमुखले २१ ह्जार , उपप्रमुखले १५ हजार र वडाध्यक्षहरुले १० हजारको दरले रकम जम्मा गरेको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासीनिले बताउनुभयो । सिद्धार्थनगरमा १३ वटा वडा रहेका छन् ।
लकडाउनको कारण खाद्यान्न, तरीकारीमा देखिएको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नगरले वडा कार्यलयको समन्वयमा टोल स्तरमा अत्यावश्यक बस्तुको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिहरको मरासीनिले बताउनुभयो । नगरपालिकाले समाजसेवी कृष्ण प्रसाद शर्मा, नारयण प्रसाद अग्रवाल , सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, उद्योग व्यपार संगठनका अध्यक्ष नारयाण प्रसाद भन्डारी, बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष रामराज उपाध्यय सहितको श्रमीककोलागि अत्यावश्यक खाद्यान्न व्यवस्थापन सहयोग समिती समेत गठन गरेको छ ।